Nhau - Dzazvino Zvinyorwa | Zvinyorwa Nhau (Peji 2)
Mhoro kuna Juan Marsé. Kuongororwa kwebasa rake rakatanhamara
Isu tataura zvakanaka kuna Juan Marsé. Uku kuongorora kushoma kwebasa remunyori weBarcelona, ​​mumwe wevanonyanya kutaura nyaya vatakambove navo.
Harrison Ford. 8 zvinyorwa zvemabasa emumwe mutambi ane mukurumbira
Harrison Ford anoshandura makore makumi manomwe nemasere nhasi. Atove mutambi anoyevedza, nhasi ndinoongorora ake akanyanya kuita mabasa kubva kufirimu mafirimu zvakanyanya sekusiyana kwazvakaita.
Ichi Chishanu, Chikumi 19, 2020, iyo inosuruvarisa nhau nezvekufa kwemunyori Carlos Ruiz Zafón yakaburitswa. Huya, udzidze zvakawanda nezvazvo.
Stephenie Meyer adzoka aine bhuku idzva mune rake rakakurumbira Twilight saga ya Nyamavhuvhu, Midnight Sun. Kudzokorora kwezvikamu zvevadiki vampires.
SM El Barco de Vapor uye Wide Angle Awards aunzwa mangwanani ano, akahwinwa naCarlo Frabetti naNando López.
Albert Uderzo, muFrance wemifananidzo akagadzira Asterix naObélix, anofa
French muartoon Albert Uderzo anofa. Musiki weAsterix naObélix vashaya muParis aine makore makumi mapfumbamwe nemaviri nekuda kwekutadza kwemoyo.
Nezuro David Gistau, mutori wenhau uye munyori ane mabhuku akati wandei akaburitswa, akashaya. Chirevo chazvino cheutapi venhau pasina zvisungo uye neakasarudzika prose.
Zvizvarwa zvitsva zvinoverenga zvishoma? Uyu mubvunzo wakanetsa pfungwa dzevakawanda mumakore apfuura. Uya, verenga zvishoma nezvazvo uye upe zvaunofunga.
Nzvimbo dzakanakisa dzekubatanidza zvakare nekuverenga muMadrid
Kana iwe uchida kuverenga, uye iwe uri muMadrid, chinyorwa ichi chakagadzirirwa iwe. Huya uone nzvimbo dzakanakisa dzekuverenga muguta reSpain.
Chiedza chinobatidzwa chakatenderedza ramangwana reCírculo de Lectores, iyo National Library yeSpain yakakumbira kuti dura rekirabhu riendeswe kwariri kuti ririchengetedze
Mushure mekuvharwa kweCírculo deLectores neGrupo Planeta uye nekugona kuparadzwa kwemafaira ayo, iyo BNE inomira. Huya udzidze zvakawanda nezve iyo kesi.
Iyo yekunyora inoreva kuti "shanduko yemaitiro mukudyiwa kwevagari" ndiyo yaive chikonzero. Huya udzidze zvakawanda pamusoro pezvaitika uye mhedzisiro yazvo.
Sarai zvakanaka kuCírculo deLectores, mushure memakumi matanhatu emakore achiunza mabhuku kudzimba dzeSpanish.
Iyo tekinoroji inochinja nzira yatinoona nayo nyika uye maitiro edu hachisi chakavanzika. Kuti zvinokanganisa ...
Akakosha Jo Nesbø. Naiye mugadziri waHarry Hole muMadrid. Zvinyorwa
Jo Nesbø akashanyira Madrid kuGetafe Negro uye ndanga ndinaye. Iyi ndiyo nhoroondo yangu yemunhu zvakanyanya uye nezvakaratidzwa nababa vaHarry Hole.
Nezuro manheru chirongwa chePlaneta Prize 2019 chakapihwa, chakahwinwa nemunyori Javier Cercas, weTerra Alta. Wokupedzisira ndiye Manuel Vilas, weAlegría.
Chiso chekupedzisira cheInspector Maigret: Rowan Atkinson
Chiso chazvino chaInspector Maigret ndiRowan Atkinson. Shanduko izere rekodhi yemu comedian wechiChirungu uyo ​​anotamba hunhu hwaGeorge Simenon
Andrea Camilleri, munyori weItari akagadzira Commissioner Montalbano, akafa, achimusiya ari nherera mushure mehupenyu hwakareba nebasa.
Cervantes Virtual ndeye webhusaiti inoona nezve kudzidza nekuparadzira mutauro weSpanish. Uya udzidze zvakawanda nezve zvirimo uye nhoroondo.
Iwo akanakisa maduramazwi echiLatin, uye zvimwe zviwanikwa zvekudzidza uyu mutauro
ChiLatin mutauro unonakidza kwazvo, kudzidza kunounza maonero matsva uye kunokuswededza padhuze neruzivo rwekare. Uya uone kuti ungazvidzidza sei.
Judith Kerr, munyori we Apo Hitler Akabira Pink Rabbit, bhuku rinotsanangudza revanhu vakuru mabhuku, anofa. Ndinoongorora basa rake.
Eduard Punset anofa. 6 mabhuku kubva kunonyanya kuteverwa sainzi mukurumbira
Nhasi Eduardo Punset, anonyanya kufarirwa nesainzi mukurumbira muSpain, apfuura. Aya anongova matanhatu emabhuku aakanyora muhupenyu hwake hwakareba.
Unesco yakatanga kuvaka Creative Cities Network muna 2004, mune zvikwata zvakawanda zvinozivikanwa: ...
Penguin Random House inowedzera boka rayo rekutsikisa naEliciones Salamandra
Penguin Random House yatenga Ediciones Salamandra. Isu tinoongorora chiitiko ichi chinosanganisa iro Random House boka mumusika wekutsikisa weSpanish.
SEI, ZVAKAWANDA SEI uye ZVINODZIDZWA NEVANHU VESIPANISANI
Kune dzakawanda ngano dzemumaguta nezve tsika dzekuverenga dzeSpanish, chii chiri chokwadi mavari? Ndiani, sei, yakawanda sei uye chii chatinoverenga?
Vanyori vetsamba, naBeatriz Osés, naBlanco de tigre, naAndrés Guerrero, vakundi ve 2019 SM El Barco de Vapor uye Gran Angular Awards.
Nhoroondo yeMharidzo yaLos Ojos Con Mucha Noche, naEmilio Calderón
NeChishanu chapfuura, Kurume 29, ndakave nerombo rakanaka rekuburitsa kuAlberti Bookstore kuMadrid, pamwe naJose ...
Vanozvitsikisa-vanyori vanokunda vaverengi.
Kutsvaga muparidzi akazvipira kumunyori mutsva kunonetsa. Mumusika wekutsikisa mazuva ese kune vamwe vanyori uye ...
Rosamunde Pilcher. Farewell kumukadzi weBritish kubva murudo nyaya
Rosamunde Pilcher, mukadzi weBritish mubhuku rerudo, akafa musi waFebruary 6 aine makore makumi mapfumbamwe nemana. Ini ndinoongorora basa rake uye chimiro chake.
King Arthur. Mapepa matsva enyaya yake uye zvimwezve
King Arthur ndeimwe yengano huru dzemabhuku. Zvimedu zvitsva zvezvakaitika kare kubva muzana ramakore rechiXNUMX zvichangobva kuwanikwa.
Mibairo yekutanga yegore rino 2019, iyo Mubairo weNadal uye Mubairo waJosep Pla, achangobva kupihwa. Vawira kuna Guillermo Martínez naMarc Artigau.
Ndinokuudza. Iko kunyorera kugadzirisa nyaya mumutauro wemasaini
TECUENTO chikumbiro chemahara chevakuru nevakuru kuti vagadzirise nyaya mumutauro wemasaini wechiSpanish nenzira yakapusa uye inonakidza.
13 ndima nyowani dzaHomer's Odyssey dzakawanikwa kuOlympia. Ini ndinoongorora iro basa reichi chinyakare cheGreek zvinyorwa.
John Malkovich saPoirot. Uye zvimwe zviso kubva kuna Detective Agatha Christie.
Ini ndinoongorora zviso zvakawanda zvakave naPootot, akachena uye akangwara hunhu hwaAgatha Christie, ane chiso chekupedzisira icho chaJohn Malkovich.
Eduardo Mendoza naArturo Pérez-Reverte vanotsikisa zvinyorwa zvitsva zvekuwa uku. Ini ndinoenderera kumberi kuti ndivatarise uye ndomirira nemoyo murefu kuti kupisa kupfuure.
Mabhuku ekushanyirwa ari mufashoni. Iko kupihwa kwekudzokorodza marongero enhau ako aunofarira kuri kukura. Kubva kumaguta zviitiko zveterevhizheni saga yeMutambo Wechigaro kuenda kumigwagwa yeLondon zvichitevera tsoka dzaSherlock Holmes.
Munyori weScotland Philip Kerr akafa nezuro Chishanu 23 nekuda kwekenza. Inosuruvarisa kwazvo uye isingatarisirwe nhau kune vese vadikani vevatema genre uyezve nezviuru zvevaverengi vayo. Bernie Gunther inherera.
Tave nechikafu chamangwanani nhasi nekupfuura kwemukurumbira weBritish fizikisi Stephen Hawking. Kubva pano ndinomurangarira aine matanhatu emabhuku mazhinji esainzi ayo aakaburitsa mukati menguva refu yebasa rake rine mukurumbira.
Munyori weAmerica James Ellroy anga ari iye akahwina mubairo wePepe Carvalho paBarcelona Black Novel Festival. Nhasi ndinotaura nyaya yangu yerudo naMad Dog weLa
Inotevera Kukadzi 2 inoratidzira makore makumi manomwe nemashanu ekupera kweHondo yeStalingrad, inguva yekutora yechipiri Hondo Yenyika. Ini ndinoongorora mamwe mazita nezve iyo yakakurumbira kurwa muguta reRussia pamabhangi eVolga.
BCNegra 2018. Nyowani edition yeiyo Nhema Novel Mutambo. Ndira 29 kusvika Kukadzi 4
Chinyorwa chitsva cheBarcelona Black Novel Mutambo, BCNegra 2018, iri kuuya, ichaitika kubva muna Ndira 29 kusvika Kukadzi 4. Isu tinoongorora misoro yenyu, zviitiko, mibairo uye mazita ane mukurumbira anokushanyira.
Ursula K. Le Guin anofa aine makore makumi masere nemasere
Nhasi tinokuunzira nhau dzakaipa dzepasi rose rezvinyorwa, uye ndezvekuti Ursula K. Le Guin akashaya ave nemakore makumi masere nemasere.
Iwo maXIII Forqué Cinematography Awards akapihwa, ayo akahwina ex aequo mbiri mazita ekunyora: _The author_ and _The bookstore_. Ini ndinoongorora mamwe mafirimu ane dingindira rakafanana.
Peter Berling, zita rakakosha mumabhuku ezvakaitika kare, akashaya musi wa 20. Tinoongorora chimiro chemunyori we _Vanakomana veGirairi_.
Kwemazuva mashoma isu takaziva kuti Nerudo haana kufa negomarara sezvakataurwa nerake gwaro rerufu. Mumwedzi mishoma mhedzisiro yacho ichazivikanwa.
Sweden Academy yataura: Kazuo Ishiguro, 2017 Mubayiro weNobel weZvinyorwa. Nhasi tinopfupikisa muchidimbu hupenyu hwake nebasa. Pane chawakaverenga here chake?
Turera ye _50 yakaburitswa mimvuri_ yaunzwa, iwo musoro wakavhara saga ine mukurumbira yezvakaipa zvemakore apfuura. Ndinoita ongororo pazviri.
5 zvitsva zvekuwa. Auster, Posteguillo, Marías, Follett uye Skal
Isu tinoongorora zvishanu zvitsva izvo zvichangobuda kana zvichakurumidza kuve pamusika. Auster, Marías, Posteguillo, Follett naScal vanopa mabasa avo matsva.
Purita Campos. Munyori waEsteri anosvitsa makore makumi masere.
Purita Campos, munyori wa _Esther y su mundo_, anotendeuka makumi masere. Isu tinopemberera kuyeuka kwake nekudzokorora kwake kwekufananidzira basa uye hunhu.
_The Snowman_, naJo Nesbo, mumitambo muna Gumiguru. Kutanga kuongorora.
_The Snowman_, inoverengeka yechinomwe mune akateedzana naCommissioner Harry Hole, naJo Nesbø, iye zvino ave muchimiro chemufirimu. Inovhura munaGumiguru.
Ryan Griffin, mubati wevhudzi anopa madhora kune vana vanoverenga
Nhasi tinokuunzira imwe yenyaya idzo dzatinoziva iwe dzaunofarira: mugeri wevhudzi anopa madhora kune vana vanoverenga. Unofungei?
Vateveri vaHarry Potter vari kupemberera nhasi: Nhasi kunopemberera gore rechimakumi maviri rekuzvarwa kwaHarry Potter, inozivikanwa kwazvo yekunyora wizard.
Madrid Book Fair yakawedzera kutengesa kwayo ne8%
Iine mamirioni 8.8 euros mumabhuku akatengeswa, iyo 2017 Madrid Book Fair inoguma nenhau dzakanaka uye nekuvandudza tarisiro.
Nezuro Juan Goytisolo akashaya aine makore makumi masere nemasere muguta reMarrakech kwaaizoenda kunogara nemhuri yeshamwari yake uye aimboshanda naye Abdelhadi.
Nhasi tinokuudza kuti tsamba 'M' yeRAE ichiri isina munhu: Rosa Montero naCarlos García Gual vakasungwa mumavhoti uye 2 vaive vasina.
Nyaya yeUniversal Literature yeBaccalaureate inobviswa
Nhasi tauya kuzokupai dzimwe nyaya dzinosuruvarisa: Iyo Universal Literature chidzidzo cheBaccalaureate chinobviswa. Nyowani nyowani yehurumende yeSpain.
Nhoroondo yeCafé Comercial de Madrid yakavhura zvakare madhoo ayo makore maviri mushure mekuvharwa kwayo kamwe kamwe. Takaita kofi yekunyora yekupemberera.
Kwezuva, iro rakashambadzira hofori Random House rakatenga Ediciones B kwemakumi mana emamiriyoni euros. Muna 40 yakatotenga Alfaguara, kubva kuboka rePrisa, ye2014.
Harry Hole adzoka mu _La sed_, bhuku raJo Nesbø regumi nerimwe pamusoro pemupurisa wake anokwezva. Uye makore makumi maviri kubvira ekutanga. Isu tinopa iyi yakakosha kwauri.
Mutambi Tom Hanks anopokana semunyori
Mutambi Tom Hanks achaona imwe yehope dzake dzichizadzikiswa nekuburitswa kwebhuku rake rekutanga renhau pfupi muna Gumiguru.
VERENGA Imbwa chirongwa chekuvandudza tsika dzekuverenga dzevana
Iyo READ chirongwa, icho chinogadzira Perros y Letras kuSpain, chinosimudzira uye chinofambisa, nerubatsiro rwembwa, tsika yekuverenga yevana vadiki.
Raibhurari yeBeinecke iparadhiso kune vese vanoda mabhuku asingawanzo uye zvinyorwa. Isu tinokuudza zvimwe nezve raibhurari inoyevedza.
Mutambo weBarcelona Nhema Novel unovhara mune yayo yegumi nembiri edition. Isu tinoongorora izvo zvavakazvipa ivo pachavo mazuva ano. Vanyori, mitero uye zviitiko.
Isu tichangobva kudzidza kubva mubvunzurudzo naye kuti Donald Trump anoda mabhuku asi haaverenge zvakanyanya Mhinduro yakasarudzika saye.
Chirongwa cheNyika cheKusimudzira Kwekuverenga. Sei uye riini.
Bazi rezvetsika rinoona Chirongwa cheNyika cheKusimudzira Kuverenga. Asi zvichaitwa riini uye munzira ipi? Isu tinoongorora panorama.
RAE yakatanga gore ichibatanidza mazwi matsva
RAE yakatanga gore ichibatanidza mazwi nyowani, anogona kana kusatifarira, asi chokwadi ndechekuti iwe unotovaona akanyorwa kunze uko ...
Nhasi tamuka nenhau inosiririsa uye inosuruvarisa: Nacho Montoto, mudetembi wekuCordoba, anofa aine makore makumi matatu nemanomwe ekuberekwa. Zorora murugare...
Kune vanyori vanoverengeka venyika uye vekunze vanyori vane basa rinopinda munzvimbo yeruzhinji gore rino. Tinotarisa mazita iwayo.
Nhetembo yaAnn Frank inotengeswa kuma140.000 euros
Mazuva mashoma apfuura nhetembo yaAnn Frank yakashambadzirwa neimba yeBubb Kuyper yemamiriyoni zana nemakumi mana emadhora. Mutengo wake wekutanga waive zviuru makumi matatu.
Kuparadza muzita raHarry Potter
Zvisinganzwisisike, pendi inoenderana naHarry Potter yakaonekwa muVigo pane megalithic dolmen anopfuura makore zviuru zvina.
Kubva muna Gumiguru 3 uye zvachose, chiratidziro "Zviyeuchidzo zvaAntonio Gala" zvichave zvakavhurwa muCórdoba, kunyanya pahwaro hwake.
Quevedo naGóngora vanoenderera neyavo paTwitter
Makakatanwa ari pakati peQuevedo neGóngora uye mavhesi akange akazvipira pamwechete adzokera kunguva yedu nekutenda kuTwitter.
Shakespeare ndiye munyori wemitambo yako yese here?
Sekureva kweongororo yakaburitswa neBBC, zvakasimbiswa kuti Shakespeare haana kunyora chete mamwe emabasa ayo kusvika parizvino akanzi ndeake.
Librotea ndiyo nzvimbo iyo, kubva zvino zvichienda mberi, vashandisi vayo vachakwanisa kuwana zvitoro zvidiki nepakati-zviri muSpain nekungodzvanya kamwe chete.
Bob Dylan, mubayiro mutsva weNobel muMabhuku
Bob Dylan akapihwa Mubairo weNobel wa2016 muMabhuku nhasi nekugadzira chirevo nyowani mudetembo murwiyo rweAmerica.
Kwemazuva mashoma tinogona kuwana emahara mabhuku muPaza de España, muSeville.
Mhuri yaGarcía Lorca inokumbira kuti nyanduri asatsvage
Mhuri yaGarcía Lorca inokumbira kuti nyanduri asatsvage, kuti chinzvimbo chavo chikudzwe.
Mhosva yaIldefonso Falcones yakavhurwazve maanopomedzerwa kubiridzira mamirioni 1,4 euros akapihwa kubva ku copyright yemanovel ake.
Iyo bepa fomati inorova iyo yedhijitari mune XXI century
Munguva idzo dhijitari zera rinotora pamusoro pezviitiko zvese zvevanhu. Iyo ndima yekuverenga inoenderera ichizviratidza pachayo senhare yetsika.
Para el maestro inyaya yenyaya yakanyorwa nevanyori veSpanish vanoratidza kuda kwavo Terry Pratchett, munyori weMundodisco.
IOxford English Dictionary yakasarudza kuisa mazwi matanhatu matsva akagadzirwa nemunyori Roald Dahl mukurangarira makore ake zana.
Roald Dahl akazvarwa makore zana apfuura nhasi
Nhasi makore zana apfuura Roald Dahl akazvarwa, munyori webasa "Charlie uye Chocolate Fekitori" pakati pevamwe.
Munyori weiyo Harry Potter saga, JK Rowling, anoramba runyerekupe rwazvino kutenderera muchokwadi: kuti Lupine anogona kuve neAIDS.
Nguva yegoridhe yaAgatha Christie yadzoka
Munguva yake Agatha Chrsitie akagadzira iyo yegoridhe zera redikitivha inova uye inonakidza. Nhasi ichiri rudzi rwakanyanya kwazvo.
Chirongwa cheBritish chekutsvaga zvitsva zvepasirese zvevana
Chirongwa cheBhukuTrust chinoonekwa nechinangwa chekutsvaga mabhuku akanaka evana emitauro mumitauro yakasiyana siyana nekuadudzira muchiRungu.
KuEdinburgh International Book Fair pakanga paine gakava padudziro yeYoung Adult zvinyorwa, zvichitungamira kuvaverengi vayo.
Google inoisa doodle yayo kubhuku «Iyo Neverending Nyaya»
Nhasi, Gunyana 1, tauya nemufananidzo mutsva muinjini yekutsvaga yeGoogle, uye ndiko ...
Tsvaga runyorwa rwekuverenga zhizha ra2016 remutungamiriri wenyika yeUnited States, Barack Obama, uyo akaverenga mabhuku mashanu akasiyana kwazvo.
Chinyorwa chazvino chinofananidza maonero evanhu pamusoro paDonald Trump uye maonero evaverengi vaHarry Potter maererano naTrump.
Makadhi Emusango, George RR Martin anouya terevhizheni nhepfenyuro
Makadhi Emusango, akateedzana akanyorwa, pakati pevamwe vanyori, naGeorge RR Martin, anozivisa inoenderana neterevhizheni. Magamba makuru munyika chaiye.
Paunonyanya kuverenga, ndipo paunonyanya kurarama
Imwe ongororo ichangoburwa inoratidza kuti kuverenga kwemaminetsi makumi matatu chete pazuva kunogona kuwedzera hupenyu hwedu.
Makore makumi matatu nemapfumbamwe ekuberekwa kwemhuka mudiwa Helen Gradwell anofa paKisimusi kubva pangozi yekuwedzeredza asati aburitsa bhuku rake rekutanga.
Shannon Cain anotungamira kurwira kununura imba yaJames Baldwin, iyo yavanoda kuparadza kuvaka 18 dzimba dzepamusoro.
Rusaruraganda idambudziko rinova iro rairo rezviitiko mune ese mativi kunyangwe izvo zvavanoda kuti titende. Mabhuku haana kuchengetedzwa.
Vapepeti veGeorge RR. Martin vanoti havana chavanoziva nezve kuburitswa kweMhepo dzeZima, chikamu chechitanhatu chesaga.
Anne Rice anodzoka neimwe nyaya yaPrince Lestat
Anne Rice anoratidzira chiono chake chehumambo hwakarasika hweAtlantis mune nyowani nyowani inotarisa zvisikwa zvake zvine mukurumbira, vampire Lestat.
George RR Martin aisagara aine mukurumbira
Kwemakore makumi maviri kubvira kuburitswa kwebhuku rekutanga muA Rwiyo rweSaizi neMoto saga, munyori akafunga kutaura nezve yake isingazivikanwe nguva.
Harry Potter ikozvino inopera na "Harry Potter uye Nhaka Yakatukwa"
JK Rowling akazivisa kuzviuru zvevateveri vake kuti nyaya yaHarry Potter inopera nebasa rekupedzisira iri: Harry Potter nenhaka yakatukwa "
Bhuku rine mabasa asina kudhindwa Charlotte Brontë adzoserwa kumusha wemhuri muHaworth, East Yorkshire.
Stephanie Meyer, munyori anozivikanwa pasi rose nekuda kwesaga rake reTwilight, achaburitsa bhuku idzva kunze kwake kweTwilight universe.
Aimbova mupristi ngochani anoburitsa bhuku rake achipokana neChechi
Mufundisi wePoland Krzysztof Charamsa, mupristi akadzingwa muVictoria mushure mekuzvizivisa kuti ngochani, achangobva kuburitsa bhuku rake rekutanga achipokana neChechi yeKaturike
Fomula yekuwana yekutengesa zvakanyanya
Tsvaga kuti ndeipi fomula inoita kuti bhuku rive rakanyanya kutengesa. Hatisi kuzokuudza kuti unganyora sei bhuku asi isu tinokuudza mamwe mazano.
Antoine de Saint-Exupéry, munyori we "The Little Prince", aive mutori wenhau muSpanish Civil War
Munguva pfupi yapfuura, kadhi rakawanikwa richisimbisa kuti Antoine de Saint-Exupéry, munyori we "The Little Prince", aive mutori wenhau pa ...
Amazon ichavhura eReader ine color screen gore rino
Amazon inogona kunge yakagadzirira eReader ine color screen, chishandiso chisingangogadzirise iyo ebook musika chete asiwo musika wepiritsi.
Rowling akatonyora script yechipiri ye "Anoshamisa Mhuka" firimu. Bhuku idzva rava kuona?
Munyori weHarry Potter ataura kuti apedza script yechipiri yeFantastic Mhuka trilogy uye kupi kwekuvawana, bhuku idzva riri kuuya?
RAE inoda kumisa kushandiswa zvisirizvo kwevanhurume nevanhukadzi, ichishandisa zvese zvisina tsarukano.
Iyo dystopian novel yakanyorwa naOleh Shynkarenko nezve remangwana reUkraine-apocalyptic ramangwana richashandurwa muChirungu kekutanga.
Brexit anga akanaka uye United Kingdom ichasiya European Union, asi ndeipi ramangwana renguva pfupi yezvitoro zvemabhuku nemaraibhurari?
Dan Brown anopa € 300.000 kuti aite mabhuku eRitman raibhurari
Dan Brown, munyori anozivikanwa nekuve iye musiki we "Iyo Da Vici Code", asarudza kupa € 30.000 kune ...
Quadriplegic Munyori Anotsamwa Nekusangana Na "Ini Pamberi Pako"
Munyori wenyaya ye autobiographical account ye tetraplegia anoratidza hasha dzake kuti bhuku rake rinoratidzwa mufirimu "Ini pamberi pako" iye asingazive.
Zvitoro zvemabhuku zveBritish zvinogona kuve nenguva yakaoma kana UK ikasiya EU
Sachigaro weWaterstones atumira tsamba kuvashandi vake achiyambira kuti zvitoro zveBritish zvichavhara kana UK ikasiya EU ...
JK.Rowling anokumbira vateveri kuti varege kuburitsa ruzivo nezve "Harry Potter neMwana Akatukwa"
JKRowling gadzira vhidhiyo kwaanobvunza vateveri vake kuti pavanoenda kunoona "mwana akatukwa" havaratidze chero chinhu chehurongwa hwake kune nyika yese.
Yale vadzidzi vanokumbira kumira kutarisa kune vachena varume vanyori
Vadzidzi veChirungu mabhuku kuYale University vakumbira kuti varege kutarisa zvakanyanya pamabasa evarume vachena.
Nyaya yazvino yaDavid Mitchell haizoone mwenje wezuva kusvika muna 2114
Iyo Yemberi Raibhurari chirongwa chaunza mupi wechipiri anopa, munyori David Mitchell, ane basa risingazoonekwa nemunhu chero kusvika 2114.
Ivo vagari venhaka, chikamu chechipiri cheKathedral cheGungwa chinobva muna Nyamavhuvhu
Vagari venhaka yenyika vanozove chikamu chechipiri cheLa Catedral del Mar, basa rinoenderera mberi nekupera medieval Barcelona ...
"Unofanira kuchinja mifananidzo isinganzwisisiki" vakaudza mumwe mufananidzo ane mukurumbira wevana
Muparidzi anopa mufananidzo wechiSweden Jan Löö ???? f chirevo chekupedzisira: kana shandura mabhuku kuti abvise pfungwa kana kuti haazotengeswe.
Anofungidzira mabhuku anokonzeresa kurwara kwepfungwa maererano nemutungamiriri
Mukuru wechikoro chakazvimiririra muEngland akataura kuti mamwe emabhuku ekufungidzira ane mukurumbira anokuvadza kune vechidiki
Mepu yeMiddle-pasi neTolkien zvirevo zvakawanikwa neBodleian raibhurari
Mepu yepakati-pasi izere nezvidimbu naJRR Tolkien yakawanikwa neBodleian library ...
Chinyorwa chakanyorerwa Harper Lee chemagazini yeFBI chakawanikwa
Harper Lee's biographer awana chinyorwa chakanyorwa nemunyori kwaanotaura nezve humhondi huviri hwakaitika muKansas.
Edhisheni nhau svondo rino (Kurume 28 - Kubvumbi 3)
Tsvaga iyo yekushambadzira nhau idzo dzakaburitswa kubva munaKurume 28 kusvika Kubvumbi 3, Mudiki mukuru, sainzi ngano uye nhoroondo.
JK Rowling akaramba achirambwa nevaparidzi zvichitevera kubudirira kwaHarry Potter
JK Rowling akaburitsa pa twitter tsamba dzekuramba dzaakagamuchira pamwe nebasa raGalbraith, mushure mekuzivikanwa nekuda kwaHarry Potter, chimwe chinhu chinoda kuziva ...
Nharo pamwe nebhuku «Diary yaAnn Frank»
Iri bhuku "Diary yaAnn Frank" kunze kwekunge iri nhoroondo yehutsinye chaihwo yehupenyu hwayo protagonist, ...
Marley Dias, musikana akatanga chirongwa chekutsvaga mabhuku chiuru ane vasikana vatema
Tsvaga iyo nyaya yaMarley Dias, musikana ane makore gumi nerimwe ekuberekwa akatanga bhuku rekutyaira
Makore zana nemakumi matatu kubvira Nyaya Inoshamisa yaDr.Jekyll naMnu Hyde
Kugadziriswa uye kuoneka kwenyaya yaDr. Jekyll naVaHyde mune dzino nhevedzano.
Inozivisa tsamba kubva kuna George Orwell achitsanangura chikonzero chebasa rake "1984"
Inozivisa tsamba kubva kuna George Orwell achitsanangura chikonzero chebasa rake "1984". Tsamba iyi yakanyorwa makore matatu asati atanga kunyora rake rakanaka basa.
Iwe unoziva here hofisi huru yekunyora pasi rose?
Iwe unoziva here hofisi huru yekunyora pasi rose? Iri muEbidos, Portugal, uye ine anopfuura makopi zana emabhuku. Ungada here kuishanyira?
Nyowani Harry Potter bhuku
Bhuku idzva raHarry Potter rakanzi "Harry Potter neMwana Akatukwa" nemunyori ane mukurumbira weSaga, JK Rowling.
Edhisheni Alba nhau dzaGunyana 2015
Tsvaga iyo yekunyora nhau iyo Edhisheni Alba yakagadzirira kuvhura ino Gunyana 2015.
Cortázar's 'Hopscotch', pakati pemabhuku akaomesesa kuverenga
Iyo Flavorwire webhusaiti yakasanganisira 'Hopscotch' naJulio Cortázar pakati pemakumi mashanu akaomesesa mabasa evaverengi.
Muparidzi weParis akaburitsa ficha yemuchina yeiyo proof-of-print ye 'Maruva ezvakaipa' nemagadziriso akanyorwa nemaoko aBaudelaire.
Nubico anounza pamwechete mazita gumi kuti azive Madrid kuburikidza nemabhuku
Nubico, imwe yemapuratifomu ekuverenga ekuverenga padhijitari yemhando yekunyorera, inopindirana nehoridhe ...
Imwe fundo inoti mumwe muvaviri veBritain anoda kuve muraibhurari. Nhasi tinoputsa zvikonzero nei kuve muraibhurari kusiri kutonhorera zvakadaro.
Ndiri kutengesa bhuku rine nhetembo dzisina kunyorwa naPablo Neruda
Nhasi uno urikutengesa 'Tsoka dzako dzinobata mumumvuri uye nedzimwe nhetembo dzisina kunyorwa', iro bhuku rinounganidza nhetembo makumi maviri neshanu dzisina kunyorwa naPablo Neruda.
Mutsva Illustrated Edition yeStoker's Dracula
Imba yekutsikisa Reino de Cordelia yakaburitsa chinyorwa chitsva uye chakanakisa cheBram Stoker's Dracula ine mifananidzo naFernando Vicente
Iwo 2014 Ignotus Awards anounzwa
Iwo 2014 Ignotus Awards akapihwa. Iwe unofungei?
Chinyorwa chemabhuku kubva ku2011
Mumwe anogona kufunga kuti kutumira runyorwa rwebhuku ra2011 iri sarudzo chaiyo. Asi chaizvo,…
Iwo gumi akanakisa ma comics a2011
Kubva pane ino blog blog ini ndakaedza mune zvimwe zvinyorwa, kubata iyo comic sechikamu chemabhuku. Mune mamwe…
Iwo akanakisa kushambadzira akaunganidzwa kuita bhuku
“… Pane zvinhu zvitatu muhupenyu izvo vanhu vasingakwanise kutiza: rufu, mitero uye…
Iwo gumi akanakisa manzwi eBolivia
Nezuro kwakapedza musangano pakati pevazhinji vanyori, vane chinangwa chekusarudza gumi emhando dzakanakisa dzeBolivia ...
Kuverenga +, mabhuku akanyatsogadzirirwa vanhu vakura
Lectura + chirongwa chakanangana nekudhinda seti yemabhuku kunyanya kufunga nezvevanhu vane matambudziko ekuona.
Tinotaura nezvazvo Sayenzi nyaya nemunyori wayo, Fernando del Álamo
Fernando del Álamo, munyori we Historias de la Ciencia, anopindura mibvunzo iri mubvunzurudzo neyakajeka uye inotsanangudza chinangwa.
Raffaella Salierno: «Vanyori vese vakaburitsa uye vanozivikanwa mutsika nemutauro wechiCatalan vanogona kuve nhengo dzePEN Català»
Raffaella Salierno anotungamira Komiti Yevasungwa Vanyori vePEN Català, chikamu cheCatalan cheInternational PEN
Mutambi wenhetembo, mudetembi, munyori wezvematongerwo enyika uye murwiri wezvematongerwo enyika Harold Pinter akashaya Chitatu chakapfuura chemakumi maviri nemana aine makore makumi manomwe nemasere, akabatwa negomarara.
Zvakasara zvaFederico García Lorca
Federico García Lorca adzoka munhau. Panguva iyo kutonga kweSpain kuri kudzidza mukana wekuita ...
Mubairo weNobel unova gakava pakati penyika
Mazuva mashoma mushure mekuziviswa kwezita remunhu anokunda mubairo weNobel mumabhuku, ...
Yakawanikwazve chinyorwa chechiHebheru
Chinyorwa chechiHebheru chakange chabiwa makore anodarika gumi apfuura chawanikwa. Chinyorwa chinonzi Bhuku ...
Bhuku raMichael Moore
Muna Gumiguru, bhuku idzva raMichael Moore, gwaro resarudzo raMike ra2008, richatanga kutengeswa.
Bhuku idzva rinotaura nezvaBarack Obama rakaburitswa. Iri bhuku rinonzi Rudzi rwaObama, iri ...
Zvataurwa naVargas Llosa nezve rusununguko
Mario Vargas Llosa akasimbisa kuti "kune rusununguko rumwe chete uye runofanira kushanda panguva imwe chete muminda yese." Iye munyori wePeruvia ...
"Vanoda Zvakanyanya Njodzi", nemunyori Walter Riso
Walter Riso munyori uyo akaberekerwa muNaples mu1951, achiri mudiki vabereki vake vakatamira naye ku ...
Mutero kuna Francisco Umbral nemugwagwa uye chiito pa41 Book Fair
Francisco Pérez Martínez, anozivikanwa zviri nani saFrancisco Umbral, akaberekerwa muMadrid muna Chivabvu 11, 1935 ndokufira mu ...
"Ciao, Verona", isina kuburitswa naJulio Cortázar, nhasi muBabelia
Babelia, mutsigiri wetsika weEl País, anotipa mumagazini yanhasi nyaya isina kuburitswa naCortázar. Imwe pfungwa ...
Nezuro, pazuva renyika yedu yezororo, takapemberera kuuya kwaChristopher Columbus muAmerica, Oceanic feat iyo yaireva ...